Indlela yokusingatha iSikolo sezoPhulo seNkundla yokuLawulwa kwezicelo
Kubafundi nabazali KwiSikole seMpilo
Indlela yokuphucula isicelo sakho seSikole sezoTyirholwa ukuba siyakunqandwa
Iseluleko sokubuyisela kwakhona
Uninzi lwezicelo kwisikolo sezonyango ziyanqatshelwa. Kuyinto enzima, engonwabanga. Xa ufaka isicelo kwisikolo sezokwelapha, kufuneka ukwamkele oku kubakho kwaye wenze icebo lesigxina xa isicelo sakho singamkelekanga. Iingcebiso ezilungileyo zisetyenziswa kusasa . Ukuba kunokwenzeka, thabatha u-Aprili MCAT uze ufumane isicelo se-AMCAS ngaphambi kokuba ihlobo liqale okanye ubuncinane ngaphambi kokuba u-Agasti uqale. Ukuba ulinda kude kube ngu-Agasti ukuthatha i- MCAT okokuqala , isicelo sakho siya kukhawulelwa kude kube namaqaku atholakalayo.
Inqanaba lokungena likhe likhethiwe kakade ngaphambi kokuba isicelo sakho sigqitywe! Isicelo sokuqala singathucula amathuba akho wokumkelwa. Ngona-ncinane, isinqumo sangaphambili siya kunceda ucwangcise unyaka olandelayo.
Ukuba ufumana ileta yokulahlwa kodwa uyaqiniseka ukuba ufuna ukuya esikolweni sezonyango, landela la manyathelo:
Shayela okanye u tyelele i-Ofisi ye-Admissions kwaye ubuze ukuba unakho yini uMcebisi we-Admissions uhlalutye isicelo sakho kwaye akunike icebiso lokuphucula umjikelezo wesicelo esilandelayo. Yiba nobubele kunye nobulelo. Landela le ngcebiso! Hlola kwakhona isicelo sakho uze wenze amanqaku endlela zokuphucula.
Thatha isicelo sakho kumcebisi wakho we-pre-med okanye omnye umcebisi wezemfundo uze umcele ukuba ahlaziye isicelo kwaye aphakamise indlela yokuphucula ngayo.
Thatha inyathelo eliya kubonisa ukuphucula kwisicelo sonyaka ozayo. Ukuba ufumana udliwano-ndlebe kunyaka ozayo, lindele ukucelwa ukuba wenzeni unyaka wonke ukukunceda endleleni yakho yomsebenzi. Sebenza kanzima ukuze ube nempendulo enkulu kulo mbuzo!
Ezi ziindlela eziqhelekileyo zokuphucula isicelo:
Fumana amanqaku aphezulu e-MCAT. Khumbula, isikolo sibona amanqaku akho asandul 'ukutsha, angenakufuneka ukuba ube ngamaqaku akho aphezulu. Ukuba ujabule ngamanqaku akho, musa ukufumana uvavanyo ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba unokuziphucula. Fumana amava amaninzi. Ukuba unikwe udliwano-ndlebe, mhlawumbi wabuya ucinga indlela umceli-ndlebe owazi ngayo amava akho. Ukuba kunokwenzeka, yakha kumava akho adlulileyo. Unokufuna umsebenzi kwizonyango.
Cinga ngokuthatha iikholeji ezininzi, ngokukodwa izifundo zezinga eliphezulu kwizayensi. Ezi zifundo ezongezelelweyo zinokuphakamisa umgangatho wakho webanga kwaye ziza kunceda ukuqinisa iikhontrakthi.
Khangela ngokucacileyo ukubhala kwisicelo sakho kwaye wenze ngcono ngakumbi kwisicelo esitsha.
Cinga kanzima malunga neencwadana zokucebisa ezisetyenziselwa isicelo sakho. Ukuba ulahlile ilungelo lakho lokuphonononga le ileta, ingabe u-100% uqinisekile ukuba iileta zaziziphakamisayo? Ngaba iileta ezibhalwa yimithombo ehloniphekileyo? Ufuna iileta ezintsha zesicelo esitsha, ngoko qiniseka ukuba iileta zakho zikhulu. Ukuba unokungabaza malunga nomgangatho weeleta kwisicelo esinqatshiwe (Umcebisi we-Admissions angakuqaphela malunga nale nto), cinga ukuba ungakhangeli ilungelo lakho lokuhlaziya iileta zomjikelezo wesicelo esitsha.
Ukuba awuvunyelwanga esikolweni sezokwelapha, kufuneka uhlolisise umnqweno wakho wokuba ugqirha, kunye nokufaneleka kwakho nezakhono. Uninzi lwabafakizicelo abatshitshisiweyo abayifuni kwakhona. Abo bathatha amanyathelo okuphucula izicelo zabo baze baphinde baphinde babuye baphumelele kakhulu amathuba abo okuphumelela. IiKomiti zokwamkelwa ezifana nokubona ukunyamezela! Ukufumana ileta yokulahla kuyaphazamisa, ewe, kodwa indlela ojongene ngayo ukungaphumeleli kukukhetha kwakho.
Ukufaka isicelo kwiSikolo soTyhutyha kwiiNqanaba ezintandathu
Ingakanani iCandelo lezoPhando lwezeMpilo?
Iinkonzo kunye neNgcono yokuba nguDokotela
10 DC Ii-Comics ezigqibeleleyo kubafundi abatsha
Abantu baseMerika kwiMfazwe yeNguquko
Yakha ifilosofi yakho yezemfundo
I-RC Transmitter neReceiver Troubleshooting
Ukubethelwa nguStefano - Inkcazo yeBhayibhile yeBhayibhile
Fumana iMetrizeded by Until Timeless Beauty of Everlasting Quotes
I-Tsunami Intensity Scale ka-2001
Iindlela zokunciphisa ukubonakaliswa kweFluoride
Amanqaku a-7 aBaziwayo kwiMbali yaseLatin America
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseMidway